Huawei Bhendi 6, smartband yakazara yakazara pamusika [Ongororo] | Gadget Nhau
Smart zvishongo pamwe nemawatch akangwara zvigadzirwa zviri kuramba zviripo muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Kunyangwe paine chokwadi chekuti pakutanga kwezvizvarwa zvemidziyo iyi zvaitaridza kuti vashandisi vaizeza kuita kwavo uye dhizaini, chokwadi ndechekuti mabhureki akadai Huawei bheja zvakanyanya pa wearables uye mhedzisiro yacho yanga iri yakanaka.
Isu tinoongorora zvakadzama ichangoburwa Huawei Band 6, chishandiso chine kuzvitonga kukuru uye hunhu hwezvigadzirwa zveprimiyamu. Tsvaga nesu zvave zviri chiitiko chedu neHuawei Band 6, simba rayo uyezve zvakare nekushomeka kwayo.
1 Zvishandiso uye dhizaini: Kupfuura nyore rundarira
3 Iyo hombe skrini uye kuzvitonga kwayo
Zvishandiso uye dhizaini: Kupfuura nyore rundarira
Nepo marangi mazhinji achibheja pazvishongo zvidiki, zvine zvisingaonekwe dhizaini uye isu tingangoda kutaura kuti chinangwa chekuviga, Huawei akaita zvinopesana neBand 6 yake. Ichi chishongo chekuyera chiri padhuze nekuve chaiko smartwatch zvese nechidzitiro, nehukuru uye neyekupedzisira dhizaini. Muchokwadi, zvinonzwisisika zvinotiyeuchidza nezve chimwe chigadzirwa chechiratidzo chakadai seHuawei Watch Fit. Mune ino kesi isu tine chigadzirwa chakanaka, chine bhatani kurudyi uye chinopihwa mumatatu mabhokisi shanduro: Goridhe uye Dema.
Iwe unofarira Huawei Band? Mutengo wacho uchakushamisa iwe pazvivakwa zvekutengesa senge Amazon
Vipimo: X X 43 25,4 10,99 mamirimita
Weight: 18 gramu
Iwo mativi akatenderedzwa zvishoma, pakati pezvimwe zvinhu kuti afarire kugadzikana kwayo uye kuramba. Ehe, isu hatiwani maburi ematauri kana maikorofoni pane ino bracelet, ivo havapo. Iyo yekumashure ndeye mapini maviri ekuchaja uye nema sensors anotarisira SpO2 uye nemoyo kurova. Iyo skrini inotora chikamu chakakura chepamberi uye pasina mubvunzo ndiyo protagonist huru yedhizaini, izvo zvinoita kuti chigadzirwa chive padhuze ne smartwatch. Zviripachena kuti gadzira ipurasitiki yebhokisi, ichifarira kureruka kwayo, nenzira imwecheteyo mabhanhire akagadzirwa ne hypoallergenic silicone.
Mune izvi Huawei Bhendi 6 Tichava nemaseru makuru matatu, iyo accelerometer, iyo gyroscope uye yeHuawei's chaiyo yemoyo yemoyo sensor, iyo TrueSeen 4.0 iyo ichabatanidzwa kuendesa SpO2 mhedzisiro. Nezvechikamu chayo, kubatana kuchasungirirwa kuBluetooth 5.0 iyo mukutipa yakatipa mhedzisiro yakanaka kubva paruoko rweHuawei P40 iyo yatakashandisa bvunzo.
Isu tinoshora mvura yatisingazive IP kudzivirira kunyanya uye mukana wekuinyudza kusvika ku5 ATM. Kana iri bhatiri, isu tine 180 mAh yakazara iyo ichabhadharwa kuburikidza neiyo magnetic yekuchaja chiteshi iyo inosanganisirwa mupakeji, kwete kudaro adapter yemagetsi, saka isu tinofanirwa kutora mukana kune mamwe majaira atinawo kumba. Iyi Huawei Band 6 ichaenderana nemidziyo ye iPhone kubva kuIOS 9 uye Android kubva pairi vhezheni yayo yechitanhatu. Isu hatina wearOS sezvingatarisirwa, isu tine Anoshanda Sisitimu yekambani yeAsia iyo inowanzoita mushe mushe mumabasa aya.
Iyo hombe skrini uye kuzvitonga kwayo
Iyo skrini inotora zvese zvinoona, uye ndizvo la Huawei Bhendi 6 simudza 1,47-inch pani iyo inotora 64% yepamberi Yakazara maererano nehunyanzvi dhata, kunyangwe ichitendeseka, nekuda kwekuumbwa kwayo kwakamonyoroka, kunzwa kwedu ndekwekuti inotora kumberi kumberi, saka zvinoita sekunge kune rakabudirira dhizaini yekugadzira kumashure. Izvi zvinokwikwidza zvakananga nezake mukoma mukuru iyo Huawei Watch Fit, iyo skrini ine 1,64 inches, zvakare ine rectangular mukugadzirwa. Hatizive kuti chikamu chedziviriro chine chiyero chipi, kunyangwe mumiyedzo yedu yakazvibata segirazi rinokwana zvakakwana.
Iyi AMOLED pani ine resolution ye194 x 368 pixelssy ine nhanho yepamusoro yekupenya kupfuura yekukwikwidza zvishongo zvakaita seinozivikanwa Xiaomi Mi Band. Neichi chikonzero, iyo skrini inonyatso kuoneka masikati machena, kunyangwe ichiti haina otomatiki kupenya. Iyo yechitatu yepakati nhanho inoita kunge ndiyo ichashanda se squire kuti igone kuibata nyore pasina kuramba uchibata kupenya uye zvakare pasina kukuvadza zvakanyanya bhatiri.
Iyo skrini ine nhanho yekubata kwekunzwa iyo yakapindura nenzira kwayo kuongororo, mumiriri wemavara unofarirwawo, kunyanya kana tichifunga kuti chishandiso chakagadzirirwa kusungirirwa pachiuno chedu uye kusanakidzwa nemabhaisikopo, ndinoreva, kuzadza kwe mavara uye zvinopesana zvinonyanya kufarira kuverengwa kweruzivo urwo iyo Huawei Band 6 inoda kutipa isu nguva dzese. Iyo skrini inotaridzika chaizvo kushandiswa kwezuva nezuva.
Bhatiri harizove dambudziko, kunyangwe iwo ma180 mAh angaita kunge mashoma kwatiri, chokwadi ndechekuti nekushandisa kwemazuva ese kwatakapa, iyo Huawei Band yakwanisa tipe mazuva gumi ekushandisa, izvo zvinogona kuwedzerwa kusvika gumi nemana kana ukaita mamwe manomano ayo pakupedzisira anotitadzisa kunakidzwa nechigadzirwa.
Isu tine yakakosha gesture control:
Kumusoro: Notification Center
Kuruboshwe kana kurudyi: Widgets dzakasiyana uye presets
Nekudaro isu tichava nekukwanisa kudyidzana neichi chigadzirwa, nekudaro gadzirisa kupenya, iyo mabhora, iyo husiku modhi uye kubvunza ruzivo. Pakati pezvishandiso zvakaiswa isu tichava nazvo:
Ropa okisijeni sensor
Kufema kurovedza muviri
Stopwatch, timer, alarm, tochi, kutsvaga uye marongero
Kutendeseka, hatizopotsa chero chinhu mune iri rundarira, kunyangwe isu tisingazokwanise kuwedzera iro zvakare.
Isu hatigone kutarisira mamwe mabasa kubva pairi, isu tine chiyero chesimbi chinorova vavakwikwidzi vayo mukugadzira uye pachiratidzipakati pamutengo we59 eurosKutendeseka, zvinoita kuti ndibvise kunze kwemakwikwi ese zvachose. GPS inogona kushaikwa, ndine chokwadi, asi hazvigoneke kupa zvakawanda zvishoma. Musika "wakachipa" smartband wakashandurwa zvachose neiyi Huawei Band.
Yakatumirwa pa: May 30 we2021
Kuzvimiririra kukuru uye mutengo wakaderera kwazvo
Kwete yakavakirwa-mukati GPS
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » Huawei Bhendi 6, rakanyanya smartband pamusika [Ongororo]